कलिलैमा सेक्स: किशोरी भन्छिन् ,अंकल बच्चा निकाल्ने औषधि दिनुस् रे
न्यूज अभियान, काठमाडौं । आज भोली किशोर किशोरीहरु असुरक्षित यौन गर्छन । र कलिलैमा गर्भ पतन गर्छन जसको कारणले गर्दा भविश्यमा बाँझोपन आउन सक्छ । यस विषयमा उनिहरु सोच्दैनन् ।
नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार करिब ६२ प्रतिशत युवक र २७ प्रतिशत युवतिले डेटिङ्गको बेला यौन जन्य गतिविधि गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
अंकल बच्चा निकाल्ने औषधि दिनुस् रे ! काठमाडौं कालिमाटीको एक औषधि पसलमा करिब १४ वर्षकी किशोरीले यसो भनिरहँदा वरिपरिका सब उनलाई नियालेर हेरिरहेका थिए । यतिकैमा विक्रेताले प्रश्न गरे, कसलाई ? उनले भनिन् दिदीलाई ।
बिक्रेताले फेरि सोधे, दिदी कति वर्षकी भइन ? जवाफमा ती किशोरीले भनिन् वर्ष त थाहा छैन अहिले १२ पढनु हुन्छ ।१७ वर्ष नपुग्दै तीन पटक एबोर्सन केही समय अघि वरिष्ठ आर्युवेद तथा प्रसुती रोगविशेषज्ञ डा. सरिता श्रेष्ठको क्लिनिकमा दुई जना किशोर किशोरी आइपुगे । उनीहरुको समस्या भनेको गर्भमा हुर्किरहेको बच्चा थियो । १६ वर्षका उनीहरुले आफूहरु केही सममयमा नै बिवाह बन्धनमा बाधिने कुरा बताए ।
आफैलाई पाल्ने भइसकका छैन यिनिहरुले कसरी बच्चा पाल्लान भन्ने सोचेर डा. श्रेष्ठले गर्भपतन गराइदिन तयार भइन ।जब उनले स्वास्थ्य परिक्षण गरिन तब छक्क परिन । उनको पेटमा पहिले नै अपरेशन गरेको ठुलो घाउँ थियो । यसको मतलब उनले पहिले नै अपरेशन गरेर बच्चा निकालीसकेकी रहिछन् । त्यसपछि डाक्टरले केरकार गर्दा उनले भनिन् यो मेरो तेस्रो पटकको गर्भ हो ।
यो कुरा परिवारका सदस्य कसैलाई पनि थाहा छैन ।विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १५ देखि १९ वर्षमा गर्भवती बन्ने किशोरीको मृत्यु हुने सम्भावना दोब्बर रहको छ । यस्तो खाले गर्भका जटिलताका कारण विकासोन्मुख देशहरुमा मात्र वर्षेनी ७० हजार किशोरीहरुको अकालमा मृत्यु भइसकेको छ ।
यो जानकारी आजको अन्नपूर्ण सम्पूर्णमा छापिएको छ ।
जमराको जुस पिउनुको फाइदा यस्ता
एक महिलाले पाइन ३१ वर्षपछि हराएको पर्स
‘हो, म वीर्य बेच्छु ,हस्तमैथुन गरेपछि मलाई चार सय रुपैयाँ दिइयो
पुरुषको कथा: 'म किन यौनकर्मीकहाँ धाउन थालेँ'
बाबा र ममीले यौनसम्पर्क गरिरहेको प्राय थाहापाइरहन्छु...
भारतीय साेंचः विमानस्थलमा सुरक्षाकर्मी मुस्कुराउनु हुन्न
हेलिकप्टर चढेर जेलबाट भागेका पक्राउ
१२ महिनाको बाच्छीले दुध दिन थालेपछि...
म्यासेडोनिया: नाम परिवर्तन गर्न चाहिने मत किन पुगेन
ब्रा लगाउन अस्वीकार गर्दा क्रिस्टिनाको जागिर चट